मननयाेग्य कुरा | manka kura
« प्रकृति प्रेमीसंग पहिलाे दिन
बागमती र सफार्इ अभियान »
भीष्म पितामह शर शैयामा पल्टेर मृत्यु पर्खदै थिए । वरिपरि उनका स्वजनहरु बसिरहेका थिए । शर शैय्यामा पल्टिरहेका भीष्मले ज्ञान,विज्ञान,राजनीति र दर्शन आदि’bout आफना प्रियजनलाई उपदेश दिइरहेका थिए । भीष्मको उपदेश सुनेर उनका स्वजनहरु मन्त्रमुग्ध थिए, तर द्रौपदी भने मन्द मन्द हाँस्दै थिइन् । यो कुरा चाल पाएका भीष्मले द्रौपदीलाइ लक्षित गरेर सोधे… द्रौपदी ,तिमीले मलाई खिस्याएर हाँसेको भान भइरहेछ, के तिमी साँच्चै मलाई खिस्याउंँदै छ्यौ ?
भीष्मको जिज्ञासाका कारण द्रौपदी आफनो मुख खोल्न बाध्य भइन् । उनले भनिन् ..पितामह, जुनबेला युधिष्ठिरले मलाई जुवामा थापेका थिए । त्योभन्दा पहिले नै उनले जुवा हारिसकेका थिए, केही पनि बाँकी थिएन उनीसंग । हारिसकेका युधिष्ठिरले मलाई पुन दाउमा राखे । यो सरासर नीति विपरीत र अन्याय थियो । उनले मलाई जुवामा थाप्नु किमार्थ न्यायसंगत थिएन । त्यसवेला मैले हजुरसंग प्रश्न सोधेकी थिएँ तर तपाईले त्यसबेला स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुभएन । आज ततपाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ । तपाईका यी कुरा सुन्दा विगत सम्झेर हाँसो उठिरहेछ । त्यतिबेला तपाईका यी सबै ज्ञान कहाँ गएका थिए ?
द्रौपदीको प्रश्न जाजय थियो । भीष्मले रहस्य खोले .. द्रौपदी, त्यो बेला म दुर्योधनको अन्नमा बाँच्थे । त्यसकारण मेरो बुद्धि भ्रष्ट भएको थियो । ’cause भ्रष्ट मान्छेको अन्न खाँदा असल मान्छे पनि भ्रष्ट हुन्छ । दुर्योधनको अन्नकै कारण मेरो बुद्धि पनि भ्रष्ट भएको थियो । आज दुर्योधनको अन्न खाई..खाई बनेका रगतका कणहरु अर्जुनको वाण लागेर मेरो शरीरवाट बगिसकेका छन् । अब मेरो शरीरमा दुर्योधनको अन्नको प्रभाव छैन, त्यसैले मैले ज्ञानगुनको उपदेश दिएको हुँ ।
यो एउटा मार्मिक प्रसंग हो । यहाँ भीष्म पितामहजस्ता शूरवीर र बुद्धिमान व्यक्ति पनि गलत मान्छेको भनौं दुष्टको अन्न खाएर आफनो बुद्धि भ्रष्ट भएको स्वीकार गर्छन ।
This entry was posted on अक्टोबर 30, 2014 at 8:27 बेलुका and is filed under वर्गविहीन.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.